ခါးပတ်အောက်၌ပြProbleနာများရှိနေသောလူတစ်ယောက်နှင့်သင်ချိန်းတွေ့သည့်အခါဘာလုပ်ရမည်နည်း။ လိင်ပညာရှင် Emily Morse၊ (2016) - သင့် ဦး နှောက်တွင်порно
သင်ကခါးပတ်အောက်တွင်ပြဿနာများနှင့်အတူတစ်ဦး Guy ချိန်းတွေ့နေသည့်အခါအဘယ်အရာကိုလုပ်ပါရန်။ Sexologist အမ်မလီ Morse က, Ph.D ဘွဲ့ကို (2016)
by ဟန္န Hickok
ဒါကြောင့်အဆင်မပြေချိန်းတွေ့ခြင်းနှင့်လိင်ကးမှကြွလာသည့်အခါကိုယ်ထင်ရှားအမှားနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်ကွန်ဒုံးကျိုးနှင့်အတူရှိတက်သည်နှင့်မမျှော်လင့်ဘဲပေါ်အတွက်လမ်းလျှောက်ခံရ။ အိပ်ရာထဲမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ SNAFUs နှင့်အတူလာသောသူအချို့တော်တော်လေးရှုပ်ထွေးစိတ်ခံစားမှုကိုမကြာခဏရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါပေမယ့်အမှန်တကယ်ပင်ပိုမိုဆိုးရွားဖြစ်ဖို့အလားအလာရှိပါတယ်။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ဖို့: ငါသည်သင်တို့ကို erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုသို့မဟုတ်အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်အတူရုန်းကန်နေရတဲ့သူတစ်ဦးယောက်ျားတစ်ယောက်နှင့်အတူနေသည့်အခါအကြောင်းပြောနေတာပေါ့။ (အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အလောင်းတွေအတွက်ချွတ်ယွင်းနိုင်ပါတယ်တခြားနည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်အိပ်ရာ-ကျနော်တို့အမျိုးသမီးတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ရင်ဆိုင်ရ ကိုယ်ပိုင်စိန်ခေါ်မှုများဤနေရာတွင်အခြိနျ, ငါတို့သည်လူတို့သညျကိုအာရုံစိုက်နေ။ )
Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု-သို့မဟုတ်အသက်အရွယ်နှင့်အတူတိုးပွားလာအရေအတွက်ကိုနှင့်တကွ, US မှာယောက်ျားသန်းပေါင်းများစွာတစ်ခု-စိုက်ထူအပေါ်သက်ရောက်မှု get သို့မဟုတ်စောင့်ရှောက်ရန်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း။ သို့သော်နှစ်တစ်ထောင်ယောက်ျားကတွေ့ကြုံခံစားကြဘူးမဆိုလိုပါ: အအဆိုအရ ဆေးပညာနှင့်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး Wisconsin ပြည်နယ် Madison ရဲ့ကျောင်းတက္ကသိုလ်ကျနော်တို့တစ်ချိန်ချိန် drop-ချွတ်နှင့်အတူယူဆပါမယ်သော်လည်း, ပျော့သို့မဟုတ်အလယ်အလတ် ED, ဒါပေါ်တွင် 10s ၎င်းတို့၏ 20s အတွက်ယောက်ျား၏အသက်-အဓိပ္ပာယ် 20 ရာခိုင်နှုန်းဆယ်စုနှစ်နှုန်းယောက်ျား, ယောက်ျား၏ 30 ရာခိုင်နှုန်း 30 ရာခိုင်နှုန်းကိုသာသက်ရောက်သည်နှင့်။ ယောက်ျားတစ်ယောက်ထိုးဖောက်မှုပြီးနောက်မကြာမီ ejaculating ကနေမိမိကိုမိမိကိုရပ်တန့်မနိုင်သည့်အခါအချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်, အခြားတစ်ဖက်တွင်ဖြစ်ပါသည်။ တချို့ကသတင်းရင်းမြစ် ခန့်မှန်း ယောက်ျား၏ရာခိုင်နှုန်းကို 20 မှ 30 (အခွအေနအေလာနှင့်သွားနိုင်ပါတယ်) တစ်ချိန်ချိန်သို့မဟုတ်အခြားမှာ PE နှင့်အတူရုန်းကန်ပေလိမ့်မည်။
ဤရောဂါများထဲမှနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်ယောက်ျားတစ်ယောက်ဘေးတို့နှင့်အိပ်ပျော်င့်သောမိန်းမတို့၏နံပါတ်အလွန်မြင့်မားဖွယ်ရှိလည်းကြောင်းကိုပြောအားလုံးပါပဲ။ (ကျွန်တော့်ကိုသူငယ်ချင်းငါ့အအဖွဲ့ကသွားနေတယ်ဆိုရင်, ထိုဆက်ဆက်စစ်မှန်တဲ့ရဲ့။ ) တဖန်သင်တို့ပြဿနာဖြစ်ကြောင်းဘယ်လိုစာနာနေပါစေ, ဘယ်လောက်စိတ်ရှည်, ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်တဲ့အရှက်ကွဲခြင်း-y နှင့်အပြစ်တင်-y ကပြုလုပ်မယ့်ကြောင်းပါသေးရဲ့: တစ်ဦးကပြဿနာ။ သငျသညျသိသူကသိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဘယ်လောက်မှ၏မေးခွန်းကို ပုံသေတပ်ထား ဒါဟာနေဆဲဖြစ်သည်။
သငျသညျအကွောငျးက Make မပြုပါနှင့်။
ကတစ်မိနစ် insecurities မှဂူမှသွေးဆောင်ဖြစ်စေခြင်းငှါသော်လည်းတစ်ခုခုရဲ့မှားယွင်းတဲ့-အထူးသဖြင့်လာသောအခါကိုယ့်ကိုယ်ပေါ်သို့အာရုံကိုဖွင့်ဖို့မခဲယဉ်း ED-ကွိုးစားသှား sexologist ပြောပါတယ် အမ်မလီ Morse က, Ph.D၏။ , အိမ်ရှင် အမ်မလီနှင့်အတူလိင်။ သူကသူမအားသူမနှင့်လိင်မဆက်ဆံဟုမဆိုလိုပါ။ ကျွန်မတို့ယဉ်ကျေးမှုဟာပုလ်ဆန်ခြင်းဆိုတဲ့အတွေးကြောင့်အမျိုးသားတွေဟာသူတို့ရဲ့ရင်သွေးငယ်တွေကိုအမြောက်အမြားအပ်နှံခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်သင်ဘယ်လောက်စိုစွတ်တယ်ဆိုတာကသင်ဘယ်လောက်အထိပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတာကိုအမြဲတမ်းထင်ဟပ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး၊ သူအတွက်သင့်တော်တဲ့ခါးပတ်အောက်မှာဖြစ်နေတာတွေကသူကိုသင့်ကိုနစ်မြုပ်စေချင်တာကိုတိတိကျကျရောင်ပြန်ဟပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ အသက်ပြင်းပြင်းရှူပါ၊ ထိုအတွင်းပိုင်းအသံများကိုတိတ်ဆိတ်ပြီးသူ့ကိုအဘယ်ကြောင့်ခက်ခဲစေသနည်း။ ယုံကြည်မှု - မင်းခေါင်းထဲမှာဘာမကောင်းတာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သူကအဆ ၁၀ ဆပိုဆိုးတာကိုပြောတာ။
အဆိုပါ Convo ပေါ့ပေါ့ပါးပါးထားပါ။
သငျသညျအကွောငျးကိုကောင်လေးစကားပြောဘူးသည့်အခါကိုယ့်ကိုယ်အကြောင်းပြောနေတာကိုရှောင်ရှားနှင့်အတူစကားလက်ဆုံမှမှောငျ, ပျက်စီးခြင်း, ဒါမှမဟုတ်စူပါလေးတစ်ဦးလေကြောင်းမဆောင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါဟာသူပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ထက်ပိုသူ့ကိုထွက်မှမထင်မှတ်ပါလိမ့်မယ်။ "ဟုအဆိုပါအိပ်ခန်းထဲမှာစကားလက်ဆုံမရှိဘူးလား" Morse ကပြောလိုက်ပါတယ်။ "နောက်နေ့မနက်စာကျော်ပါကလုပ်နေတာကြိုးစားပါ။ နောက်ထပ်အစွန်အဖျားကိုသင်ကားထဲတွင်ဒါမှမဟုတ်ခွေး-ဒါသူတို့ကိုမျက်လုံးချင်းကြီးမားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖြစ်နှင့်စကားလက်ဆုံချောမွေ့သွားပါစေနိုင်သည်ဖြစ်စေမ option ကိုပေးခြင်း, တစ်ဦးထိခိုက်မခံတဲ့ခေါင်းစဉ်ရဲ့လမ်းလျှောက်နေသည့်အခါထိုသို့ပြုမှဖြစ်ပါတယ်။ "သင်၏သေံနှင့် Vibe ကိစ္စရပ်များသင်အမှန်တကယ်အဘယ်သို့ပြောသည်ထက် ပို. ပေမယ့်သင့်ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုနောက်ဆုံးညဥ့်ဖြစ်ပျက်အဘယျ "၏လိုင်းများတလျှောက်တွင်တစ်ခုခုဖြစ်သင့်အဘယ်သူမျှမကြီးတွေသဘောတူညီချက်ပဲ! ကျွန်မယောက်ျားတွေအများကြီးဒီနှင့်အတူရုန်းကန်ကြားဖူးတယ်ဒါကြောင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကဆရာဝန်တစ်ဦးကထုတ်စစ်ဆေးရှိခြင်းတန်ဖိုးရှိပါတယ်။ "
ငယ်ရွယ်သောယောက်ျားများတွင်အလေးသာမှုသည်ပြareနာသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်များဖြစ်သည်ဟုလိင်ကုထုံးပညာရှင်ကဆိုသည် လော်ရီ Watsonအဆိုပါ Podcast တခုကို၏, LMFT, အိမ်ရှင် FOREPLAY: ရေဒီယိုလိင်ကုထုံး။ ဇီဝကမ္မဗေဒကိုဘယ်လိုဖယ်ထုတ်ရမလဲဆိုတာဒီမှာကြည့်ပါ။ သူစိုက်ထူနိုင်ပေမယ့်မစောင့်နိုင်လျှင်, သူသည်မိမိကိုယ်ကိုစိုက်ထူ။ သူသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အခါမည်သည့်ပြproblemနာမျှမရှိဘဲသုက်လွှတ်နိုင်သည်။ ပြtheနာသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမဟုတ်ပါ။ ” အဲဒီအစားသူကြည့်ဖို့လိုကောင်းလိုလိမ့်မယ်စိတ်ခံစားမှုပိုင်းအရဒါမှမဟုတ်ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်တဲ့အရာတစ်ခုခုရှိနိုင်တယ်။ သင်၌သူ၏မည်မျှလေးနက်မှုနှင့်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့်ဆက်ဆံရေးအပေါ် မူတည်၍ ၎င်းသည်သင်သူ့ကိုကူညီနိုင်လိမ့်မည်။
သူကိုယ်တော်တိုင်ထွက် Psyching ရဲ့နည်းလမ်းများနေရပ်လိပ်စာ။
အခြို့သောလူနေမှုပုံစံစတဲ့ဒါမှမဟုတ်သင်ကသူ့ကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းကူညီနိုငျသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်များရှိပါသည်။ ဥပမာ, သငျသညျလိင်ဆက်ဆံမတိုင်မီသူကိုမှန်မှန်သောက်သုံးခြင်းဖြစ်သနည်း ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးလားကိုသတ်နိုင်ပါတယ်။ သူက porn ပေါ်မှာ overdoing ခဲ့သလဲ "Porn ကသူတို့ဖို့အသုံးပြုတဲ့အနေအဘယျသို့င်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယောက်ျားချွတ်ရမယ့်မြင့်မားတဲ့စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုလိုအပျကွောငျးဆိုလိုတာကဆွ၏ bar ကိုပြုစုပျိုးထောင်စောင့်ရှောက်" Morse ကပြောလိုက်ပါတယ်။ "သူ့ကို-ကြင်-ကြောင်းပြောပြပါဟုသူချွတ်ထောက်ခံသို့မဟုတ်တစ်ချိုးယူလျှင်, သင့်ရဲ့လိင်ဘဝကိုကူညီနိုင်ဘူး။ " သငျသညျဘဝကိုတခြားဒေသများရှိတိုက်ခိုက်နေမယ်ဆိုရင်လည်း, ကအိပ်ရာသို့ကူးဖိတ်နိုင်, Watson ကပြောပါတယ်။ "ဟုသူကသငျသညျမှာအမျက်ထွက်မယ့်လျှင်, ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်နိုင်စွမ်းဆုံးရှုံးသွားနိုင်ပါတယ်" ဟုသူကဆိုသည်။ "သူတို့အပြစ်ရှိကြောင်းခံစားရနှင့်၎င်းတို့၏ penises စာသားတစ်ကြိမ်မှာအမျိုးသမီးနှစ်ဦးနှင့်အတူအိပျပျြောအကြောင်းကိုဝိရောဓိကြောင့်နှောင့်ရှက်ခက်လာပြီရှိခိုးသူအခြို့တို့သညျ။ " ကအာရုံကြောရဲ့လျှင်, သင်နေပါစေ, မိမိက D-နှင့်အတူကြောင့်ဖြစ်ပျက်ပျော်စရာရှိခြင်းနေသူ့ကိုစိတ်ချ သူကတခြားနည်းလမ်းတွေထဲမှာပျော်မွေ့သင်အမြဲနိုင်ပါတယ်။ သူကချွတ်ကသူ့စိတ်ကိုယူပြီးတာနဲ့သူကဖွင့်မရသို့မဟုတ်သူကြွလာပုံကိုမကြာမီထိန်းချုပ်နိုင်မယ့်ကွောငျးတှေ့နိုငျပါသညျ။
သင် PE သို့မဟုတ် ED ဖြစ်စေတဲ့ရဲ့အရာပေါ်အတွက်အိမ်ပြန်နိုင်ကြမဟုတ်ပါဘူး, သူ၏ဆရာဝန်ကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမယ့်ပြောပါတယ်လျှင်, သင်တစ်ဦးလိင်ကုထုံးကိုမြင်လျှင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်, Watson ကပြောပါတယ်။ ဟေ့, ထိုကျွမ်းကျင်သူများအဘို့အတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာပဲ! သို့သော်နောက်ဆုံးတွင်သူသည်အကူအညီရနိုင်သူတစ်ဦးတည်းသာဖြစ်ပါတယ်။ "အမျိုးသားများမိမိတို့မလုံလောက်နေပြောသည်ပါလိမ့်မယ်ကြောက်လန့်နေသောကြောင့်, လိင်ကုသကြည့်ဖို့ကြောက်လန့်နေကြတယ်" ဟုသူမကဆိုသည်။ "ဟုသူကအလွန်ရှည်လျားများအတွက်အကူအညီရတဲ့နှောင့်နှေးလျှင်မူကား, က။ သူအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှကြီးထွားခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲပစ်ရန်ဆန္ဒရှိပါလိမ့်မည်သူတစ်ဦးလိင်ဆက်ဆံဖက်မဟုတျကွောငျးညွှန်ပြစေခြင်းငှါ," ထိုနှင့်ကိုယ်နှိုက်၏တစ်ဖွဲ့လုံးကအခြားပြဿနာပါပဲ။
အကယ်၍ သူသည်အခြေအနေနှင့်စပ်လျဉ်း။ သူနှင့်သူ၏အတ္တသည်အတူတကွအလုပ်လုပ်ရန်နှင့်အဖြေရှာရန်အလွန်အမင်းပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေပါကသူ့အကြောင်းပြောနေသည့်အရာကိုဂရုပြုပါ။ သူနဲ့ချိန်းတွေ့တာမဟုတ်ဘဲသင်အိပ်ချင်နေတဲ့သူလား။ Watson က“ ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှောင့်နှေးတာ၊ ဆင်ခြေပေးတာ၊ ဒေါသဖြစ်တာမျိုးရှိရင်ဆက်လုပ်ဖို့နှစ်ခါစဉ်းစားပါ။ ၎င်းသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဟဇာတဖြစ်ခြင်းကိစ္စမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်သင်ယူသူမဟုတ်သူနှင့်မကိုက်ညီမှုသည်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဘဲပြောင်းလဲလိုစိတ်မရှိခြင်းဖြစ်သည်။